0x စျေး - အွန်လိုင်း ZRX ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို 0x (ZRX)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ 0x (ZRX) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ 0x ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $176 824 537.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ 0x တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
0x များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
0xZRX သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.4570xZRX သို့ ယူရိုEUR€0.3860xZRX သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.3490xZRX သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.4160xZRX သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr4.060xZRX သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.2.870xZRX သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč10.070xZRX သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.70xZRX သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.6040xZRX သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.6370xZRX သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$10.20xZRX သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$3.540xZRX သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$2.480xZRX သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹34.210xZRX သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.76.970xZRX သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.6270xZRX သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.6960xZRX သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿14.190xZRX သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥3.170xZRX သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥48.830xZRX သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩541.230xZRX သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦175.760xZRX သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽33.550xZRX သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴12.58
0xZRX သို့ BitcoinBTC0.00004 0xZRX သို့ EthereumETH0.00119 0xZRX သို့ LitecoinLTC0.0084 0xZRX သို့ DigitalCashDASH0.00504 0xZRX သို့ MoneroXMR0.00513 0xZRX သို့ NxtNXT35.65 0xZRX သို့ Ethereum ClassicETC0.0674 0xZRX သို့ DogecoinDOGE131.91 0xZRX သို့ ZCashZEC0.00555 0xZRX သို့ BitsharesBTS14.08 0xZRX သို့ DigiByteDGB14.63 0xZRX သို့ RippleXRP1.62 0xZRX သို့ BitcoinDarkBTCD0.0158 0xZRX သို့ PeerCoinPPC1.52 0xZRX သို့ CraigsCoinCRAIG208.28 0xZRX သို့ BitstakeXBS19.49 0xZRX သို့ PayCoinXPY7.98 0xZRX သို့ ProsperCoinPRC57.35 0xZRX သို့ YbCoinYBC0.000246 0xZRX သို့ DarkKushDANK146.7 0xZRX သို့ GiveCoinGIVE990.05 0xZRX သို့ KoboCoinKOBO104.14 0xZRX သို့ DarkTokenDT0.421 0xZRX သို့ CETUS CoinCETI1320.26